काठमडौं, माघ २३ – एन्फाका निलम्बित अध्यक्ष गणेश थापा र उनका छोरा गौरवले विदेशी नागरिकबाट लिएको गैरकानुनी रकमबारे उजुरी परेको लामो समय बितिसकेपनि सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अझै प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाएको छैन ।
गणेश थापाले एसियाली फुटवल महासंघ (एएफसी)का पूर्व अध्यक्ष विन हामामसँग लिएको एक लाख १५ हजार डलरबारे अनुसन्धान गर्न भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितीले सम्पति शुद्धिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । लेखाबाट गएको पत्रको प्रति सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग पुगेको लामो समय बितिसकेको छ । लेखाले दुई महिनामा अनुसन्धान सक्न निर्देशन दिएको भएपनि विभागले भर्खरै मात्र अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ ।
'गणेश थापाले आर्जन गरेको गैरकानुनी रकमबारे अनुसन्धान गर्न हामीले अनुसन्धान अधिकृत तोकेका छौं, बैंक खाता र अडिट रिपोर्ट विश्लेषण गर्ने काम शुरु भएको छ,' विभागमा महानिर्देशक केवल प्रसाद भण्डारीले भने ।
थापाले विन हमामको ठेकेदार कम्पनी केम्को कन्सट्रक्सनसँग व्यक्तिगत रुपमा १ लाख १५ हजार डलर लिएका थिए । केम्कोबाट लिएको सो रकमबारे विवाद भएपछि उनले विन हमाम २००८ देखि आफ्ने व्यापारीक साझेदार भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । दुई दशक एन्फाको अध्यक्ष भएका थापाले त्यसपछि पटक–पटक भन्दै आएका छन् 'मैले फुटवलमा सारा जीवन समर्पण गरेँ मेरो फुटवलबाहेक केही छैन ।'
'फुटवलबाहेक केही छैन' र 'कतारमा व्यापार छ' यी दुई परस्पर विरोधी भनाईले थापाले हमामसँग लिएको एक लाख पन्ध्र हजार डलरको स्रोत माथि जनस्तरबाट समेत चासो बढेको छ । यस्तोमा विभागले भने भर्खर 'फाइनान्सीयल एक्सन टास्क फोर्स'को संजाल भित्र रहेको कतारको मनी लाउन्ड्रीङ हेर्ने निकायलाई पत्र पठाएको जनाएको छ ।
आतंकवादी क्रियाकलाप वा गैरकानुनी धन्दा गरेर आर्जित सम्पतिबारे अनुसन्धान गर्न स्थापना गरिएको सम्पति शुद्धिकरणको कानुनमा उजुरी परेपछि सम्वन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिने ब्यवस्था छ । तर कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले अहिलेसम्म गणेश थापालाई एक पटक पनि बोलाएको छैन । थापाको डलरकाण्डबारे अनुसन्धानका गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि सम्पति शुद्धिकरणलाई पत्र पठाएको थियो ।
थापा आफैंले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरिएको भनिएको रकम आफुले कसरी कमाएको भन्ने प्रमाण देखाएर छुट वा स्रोत खुलाउन असफल भए कारवाही भोग्न सक्थे । तर विभागले थापालाई सोधपुछका लागी पत्र काट्ने हिम्मत गरेको छैन ।
'कानुन अनुसार अगाडी बढ्ने हो भने लेखा समितिले पत्र पठाएको भोलीपल्टै थापालाई बोलाएर सोध्नुपर्ने हो तर यहाँ कानुनअनुसार चल्न कहाँ सकिन्छ ?,' विभागका एक अधिकृतले भने । उनका अनुसार थापा आफैंले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरिएको भनिएको रकम आफुले कसरी कमाएको भन्ने प्रमाण देखाएर छुट वा स्रोत खुलाउन असफल भए कारवाही भोग्न सक्थे । तर विभागले थापालाई सोधपुछका लागी पत्र काट्ने हिम्मत गरेको छैन । थापालाई बोलाएर प्रमाण पेश गर्नका लागी किन आग्रह नगरेको भन्ने प्रश्नमा विभागका महानिर्देशक भण्डारीले भने, 'त्यसो गर्दा हामीले आरोपितलाई उपलब्ध गराउने समय सीमाभित्र उनीहरुले हिसाव मिलाएर प्रमाण पु¥याएर उन्मुक्ति पाएका घटनाहरु देखापरेपछि अहिले त्यो प्रक्रिया रोकेका छौं ।'
गौरब थापाको केस ढिसमिसको तयारी
गणेश थापाका छोरा गौरव थापाको नाममा विन हमामले पठाएको १ लाख डलरबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारले सम्पति शुद्धिकरणकालाई पत्र लेखेको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । सन् २००९ मा बिन हमाम र शेख सलमानको बीचमा निर्वाचन हुँदा गणेश थापासँग एक भोट मागेर हमामले उनको छोराको खातामा उक्त रकम पठाएका थिए । अख्तियार स्रोतका अनुसार २०१२ मै सम्पति शुद्धिकरणलाई छानविनका लागी पत्र लेखेपनि सो प्रकरणलाई अहिले पेन्डिङमा राखिएको छ । भर्खरै सम्पति शुद्धिकरणवाट सरुवा भएका तत्कालिन कामु प्रमुख अर्जुन पोखरेलले भने रातोपाटीसँग कुरा गर्दै गौरवको प्रकरणवारे आफुलाई थाहै नभएको बताएका थिए । तर हालका महानिर्देशक भण्डारीले यसबारे थाहै नभएको भन्ने गैरजिम्मेवार अभिब्यक्ति नदिएपनि अनुसन्धान भैरहेको रेडिमेड जवाफ दिएर पन्छिए । 'गौरव थापाले लिएको डलरबारे पनि एउटै अधिकृत मार्फत अनुसन्धान गरिरहेका छौं,' भण्डारीले भने ।
सम्पति शुद्धिकरणका अर्का एक अधिकृत भन्छन्, 'गौरव थापाको प्रकरणको कुरा पछिल्लो पटक त्यति सार्वजनिक रुपमा नउठेकाले अनुसन्धान शुरु भएकै थिएन, अहिले लेखाले पत्र पठाएपछि सामान्य चर्चा शुरु भएको छ ।' वर्षमा दुईवटा महानिर्देशक परिवर्तन हुँदै आएको विभागमा गौरबको केश ढिसमिस गराउने अन्तिम सेटिङ मिलिसकेको ति अधिकृत दाबी गर्छन् । 'फुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमा पनि यत्तिवेला एन्फा प्रकरण चर्चामा रहेको वेला अब भने केही प्रक्रिया अगाडी बढ्ला,' उनले भने । हमामले बैंक खाता मार्फत गौरवलाई पठाएको पैसाको स्रोत खुलेको छैन ।
गणेश र गौरवले लिएको ब्यक्तिगत पैसा बाहेक पनि एन्फामा भएको सवै आर्थिक कारोवारबारे अध्ययन गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था मार्फत आर्थिक विशेषज्ञ करार गर्ने तयारीमा आफु रहेको महानिर्देशक भण्डारीले बताए । भण्डारीले भने, 'एन्फाको विधान पनि अध्ययन गर्दै छौं, बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा हालसम्म अस्वभाविक बजेट देखिएको छैन ।'
विभागका महानिर्देशक केवल प्रसाद भण्डारी
एन्फा स्रोतका अनुसार कतार फुटवल संघले २०११ देखि २०१४ सम्मको लिग संचालनका लागी ८ लाख डलर दिएको दियो । त्यसमध्ये दुई लाख डलर मात्रै एन्फाको खातामा हालेर ६ लाख डलर थापाले गायब पारेका थिए । त्यो ६ लाख डलर सहित गोल प्रोजेक्टको रकमबारे पनि अनुसन्धान गर्न सम्पति शुद्धिकरणलाई पत्र पठाएको छ । ६ लाख डलरबारे विभागका महानिर्देशक भण्डारीले केही वोलेनन् तर गोल प्रोजेक्टवारे भने छानविन गर्ने उनले बताए ।
हरेक पल 'छानविन गर्दै छौं' भन्ने रेडीमेड जवाफ दिएर पन्छने सम्पति सुद्धिकरणले जनअपेक्षा अनुसार काम अगाडी बढाएको छैन । पहुँचवालाहरुको छायाँमा पर्दै आएका कारण हरेक वर्ष दुई जना महानिर्देशक फेरिँदै आएको सम्पति शुद्धिकरण यसपटक पनि तिनै पहँुचवालको चलखेलमा परेको आशंका गर्न थालिएको छ । 'ठूला चलखेल'को प्रशंगमा विभागका महानिर्देशक भण्डारीले हाँस्दै भने 'खै, चलखेल भएपनि हामीभन्दा माथितिरै होला ।' त्यही मथितिरकै कारण हो या अन्य कुनै, नत्र किन ढिला थयो अनुसन्धान ? आखिर किन तर्सियो गणेश थापाका वावुछोरासँग सम्पति शुद्धिकरण ?
More in this category: « भाडा घटाउने तयारी	त्रिमूर्ति निकेतनमा ११३औं सम जयन्ती पाँचजना कविबाट कविता वाचन »